19/05/13 - 26/05/13 (122)
Myanmar frees more than 14,600 convicts but justahandful of political prisoners
By Associated Press, Updated: Tuesday, May 17, 6:29 AM YANGON, Myanmar — Myanmar is releasing more than 14,600 prisoners underaclemency program that will include very few political prisoners. Prison Department Director General Zaw Win said most of the convicts, including 2,166 women, would be freed Tuesday from jails around the country.
5/17/2011 06:11:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၇-မေ-၂၀၁၁)
မုဒုံ ဗုံးကွဲအပြီး လုံခြုံရေးကျပ်(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန်အစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ရုပ်သံရိုက်ခွင့်ပိတ် (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဇေယျာသော် (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် (နှိပ်ရန်)
အစိုးရ လုပ်ရပ်ဟာ စိတ်ပျက် စရာလို့ ကင်တားနား ဆို(နှိပ်ရန်)
ပြန်လွတ် သူတွေထဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား သိပ်မပါ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာအပေါ် အမေရိကန် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု တနှစ်သက်တမ်းတိုး(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ဖို့ လုပ်သွားမယ် - ဇေယျာသော်(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၀ ကျော် လွတ်မြောက်(နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းသား သောင်းကျော်လွှတ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နည်းပါး(နှိပ်ရန်)
မြန်မာအစိုးရ၏လွတ်ငြိမ်းခွင့် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် စိတ်ပျက်(နှိပ်ရန်)
အစိုးရ၏ လွတ်ငြိမ်းခွင့် အတုအယောင်ဟု အတိုက်အခံအဖွဲ့များ ရှုတ်ချ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာအစိုးရအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန် သက်တမ်းတိုး(နှိပ်ရန်)
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှုတ်ချ(နှိပ်ရန်)
NLD ပါတီဝင် ၁၆ ဦး ပြန်လွတ်လာ (နှိပ်ရန်)
ကြံ့ခိုင်ရေးကိုသာ အာဏာလွှဲကြောင်း ဦးမောင်ဦး ပြော(နှိပ်ရန်)
လျှော့ပေါ့ထောင်ဒဏ်တွင် ဦးခင်ညွန့် အကျုံးမဝင်(နှိပ်ရန်)
သမ္မတ ထောင်ဒဏ် လျှော့ပေါ့မှုအပေါ် သူတို့အမြင်(နှိပ်ရန်)
ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါ တောင်ငူကူး (နှိပ်ရန်)
နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင် မျက်စီခွဲစိတ်(နှိပ်ရန်)
အဆိုတော် ဇေယျာသော် ပြန်လွတ်(နှိပ်ရန်)
NLD သတင်းစာသင်တန်းဖွင့် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာပြည်တွင် ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်အတွင်း ပြင်းအားမြင့်ငလျင်များ လှုပ်ခတ်မည် (နှိပ်ရန်)
သျှမ်းလက်နက်ကိုင်နှင့် ပတ်သက်သူများအား မွှေနှောက်ဖမ်းဆီးနေ (နှိပ်ရန်)
တန့်ယန်းမြို့အထွက်ဂိတ် တိုက်ခိုက်ခံရ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်များအား လားရှိုးတိုင်းမှူးဆင့်ခေါ် ((နှိပ်ရန်)
ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် UNFC တွင် SSPP/SSA ပြန်ပါဝင်လာ(နှိပ်ရန်)
သမ္မတရဲ့ တိုတိတိုနန့် လျှော့ပေါ့မှု(နှိပ်ရန်)
5/17/2011 10:01:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (17 မေ 2011)
New York တရားရုံးမှာ Mr Strauss-Kahn အစစ်ဆေး ခံနေစဉ်
ဘုရင်မကြီးရဲ့ သမိုင်းဝင် အိုင်ယာလန် ခရီးစဉ်(နှိပ်ရန်)
မစ္စယင်လပ် ကို အားလုံးက အာရုံစိုက်နေကြပြီ(နှိပ်ရန်)
နိုဘယ်ဆုရှင်များ လူသားမျိုးနွယ်စုကို တရားစွဲဆိုမည် (နှိပ်ရန်)
IMF အကြီးအကဲ လိင်စော်ကားမှု အာမခံမရ(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် အစိုးရ အသုံးစရိတ်နဲ့ ကြွေးမြီကိစ္စ ၂ ပါတီကြား အငြင်းပွား(နှိပ်ရန်)
IMF အကြီးအကဲ အာမခံ ငြင်းပယ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
Posted: 17 May 2011 0836 hrs WASHINGTON: The United States on Monday renewed its economic sanctions against Myanmar and urged the military-backed regime to go much further after it reduced prisoners' terms by just one year.
The Voice ဂျာနယ်, May 16 - 22 , 2011 ထုတ်
Myanmar News Now: 17 May 2011
Senior U.S. diplomat to visit Myanmar this week (Click)
Myanmar prisoner release fails to impress (Click)
Myanmar: Prison sentence reductions are not enough(Click)
Myanmar laat duizenden criminelen vrij(Click)
Myanmar frees 14‚600‚ but few political prisoners (Click)
Myanmar frees more than 14,600 convicts but justahandful of political prisoners(Click)
Myanmar laat duizenden gevangenen vrij, maar geen politieke(Click)
Myanmar laat 17.000 gevangen vrij(Click)
Myanmar laat duizenden gevangen vrij(Click)
Myanmar frees 1000s in 'pathetic' jail-term cut(Click)
17.000 gedetineerden krijgen amnestie in Myanmar (Click)
Myanmar frees 14,600, but few political prisoners(Click)
Myanmar frees 14,600, but few political prisoners (Click)
Myanmar Details Clemency Program for Prisoners (Click)
Rights group: Myanmar's jail sentence reductionsa«joke»(Click)
Myanmar announces limited cut to prison terms (Click)
Línea ferroviaria Bangladesh-Myanmar reforzará relaciones bilaterales(Click)
Myanmar schaft doodstraf officieel af(Click)
U.N. wants more action from Myanmar (Click)
Myanmar schaft officieel doodstraf af(Click)
Myanmar schaft officieel doodstraf af (Click)
Myanmar Lifts Rice Export Ban (Click)
Myanmar president announces amnesty for death row prisoners(Click)
Political Games and economic trade offs in Myanmar(Click)
Myanmar announces clemency for convicts, likely of be of little help to political prisoners(Click)
Myanmar announces limited cut to jail terms (Click)
Myanmar president announces clemency for prisoners(Click)
Myanmar president announces clemency for prisoners (Click)
5/17/2011 05:55:00 AM